Maamul goboleedyada oo muddo labo maalmood ah loo qabtay in ay ku soo gudbiyaan xubnaha aqalka sare | Sagal Radio Services
Maamul goboleedyada oo muddo labo maalmood ah loo qabtay in ay ku soo gudbiyaan xubnaha aqalka sare
Guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa soo saaray digniin kama dambeys ah oo ah waqtiga doorashada Soomaaliya gaar ahaan xilliga la soo gudbinayo xubnaha Aqalka Sare ee laga sugayo Dowlad Goboleedyada.
Afhayeenka Guddiga Keynan ayaa Sheegay in maamul goboleedyada looga baahan yahay in laba maalmood ay haystan oo ay ku soo gudbiyaan xubnaha aqalka sare, labadaas maalmood ay maanta ku jirto.
Madaxweynaha Koofur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in xubnihii Aqalka sare ee Koofur Galbeed ka imaanaya ay diyaar yihiin oo uu guddiga doorshada u gudbin doono. Waana dowlad goboleedka kaliya ee ka sheegay in muddo labo cisho ah ku soo gudbin doonaan.
Shanta October oo ku beegneyd shalay ayaa la filayay in Guddiga Doorashooyinka loo soo gudbiyo Xubnaha Aqalka sare ee Dowladda Soomaaliya,balse Guddigu waxaa uu sheegay inuu dib u dhac ku yimid waxaana Maamul Goboleedyada uu Guddigu ugu baaqay in ay Labo Maalin oo Maanta ku jirto ay u soo gudbiyaan Guddiga Doorshooyinka Dadban.
Tags Doorashada Soomaaliya